2 Oct 2018 . 3:16 PM
ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ရပ်များ (၂)
ဘောလုံးလောကမှာ အယူသီးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ရပ် အပိုင်း(၁)ပြီးတော့ အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
အတွင်းခံကို ပြောင်းပြန်ဝတ်တဲ့ မူတူး Mutu
ကစားသမားဘဝမှာ ပြဿပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရိုမေးနီးယား တိုက်စစ်မှူးကြီး အက်ဒရီယန်မူတူး Adrian Mutu ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ သူ့မှာလည်း ထူးထူးခြားခြား ယုံကြည်မှု တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပြောင်းပြန်ဝတ်ရင် ကံကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘောလုံးသမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ဖိနပ်ပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ဝတ်ဆင်ကစားလေ့ရှိပေမယ့် မူတူးလို အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပြောင်းပြန်ဝတ်တာမျိုးကတော့ တကယ့်ကို ဟာသပါပဲ။
ကစားသမားရွေးချယ်ရင် ဇာတာခွင်အရင်ကြည့်တဲ့ ဒိုမီနက်ချ် Domenech
နည်းပြတစ်ဦးဆိုတာက အသင်းအတွက် ကစားသမားရွေးချယ်ရင် ခြေစွမ်း၊ ကိုယ့်နည်းဗျူဟာနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ၊ ကြံ့ခိုင်မှု စတဲ့အချက်တွေကို ကြည့်လေ့ရှိပေမယ့် ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြဟောင်း ဒိုမီနက်ချ်ကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ သူက ကစားသမားတွေရဲ့ ဇာတာခွင်ကို ကြည့်ပြီးမှ အသင်းအတွက် ရွေးတာပါတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ဇာတာခွင်ညံ့တဲ့ ရော်ဘတ်ပီရက်စ် Robert Pires လို ကစားသမားမျိုးတွေ ပြင်သစ်အသင်းမှာ အရွေးမခံခဲ့ရတာပါပဲ။
ကံကောင်းစေတဲ့ ဆေးမင်ကြောင်တွေ ထိုးတဲ့ ဆီနီဂေါဂိုးသမား
ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် ပြသဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်၊ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတွေ မလုပ်နဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဆီနီဂေါဂိုးသမားဟောင်း တိုနီဆယ်လ်ဗာ Tony Sylva ကတော့ အဲဒီလို မထင်ပါဘူး။ ၂၀၀၂ အာဖရိကနိုင်ငံများဖလား ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် သူက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကံကောင်းစေတဲ့ ဆေးမင်ကြောင်တွေကို ဆရာတစ်ဦးခေါ်ပြီး ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်။ သူပဲ ကံကောင်းတာလား၊ အဲဒီဆေးမင်ကြောင် အစွမ်းလာတော့ မသိဘူး။ အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆယ်လ်ဗာဟာ (၄၇၈)မိနစ်အထိ ပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ပြိုင်ဘက်ကို ကျိန်စာတိုက်တဲ့ ကင်မရွန်းအသင်းနည်းပြ
ကင်မရွန်းအသင်းနည်းပြဟောင်း ဝင်းဖရိုင်းရှာဖာ Winfried Schafer က ကိုယ့်အသင်း အနိုင်ရရေးအတွက် သင့်လျော်တဲ့ နည်းဗျူဟာ၊ လူအခင်းအကျင်း အသုံးပြုဖို့ မစဉ်းစားဘဲ ပြိုင်ပွဲကို အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သူပါ။ ၂၀၀၂ အာဖရိကနိုင်ငံများဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ရှာဖာနဲ့ သူ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ နီကိုနို Nikono တို့ဟာ အာဖရိကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Voodoo နည်းလမ်းကို သုံးပြီး သူတု့ိနဲ့ကစားမယ့် ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြတာကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံး အဖမ်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အယူသီးမှုကတော့ ရယ်စရာလည်းကောင်းသလို၊ အံ့အားသင့်စရာလည်းကောင်းနေတယ်။ သူတို့တွေလည်း ဒီလိုဟာတွေ ယုံကြည်တာပဲလားဆိုပြီး ရယ်ပွဲဖွဲ့ချင်စရာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဆောင်းပါးတိုကို ဖတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . .